🥇 ▷ Black Shark 10000mAh: Xiaomi & # 039; s powerbank weyn ayaa yimid! ✅
Black Shark 10000mAh: Xiaomi & # 039; s powerbank weyn ayaa yimid!
Astaamaha Black Shark ee ‘Xiaomi’s Black Shark’ ayaa caan ku ah lacagta casriga ah ee ay ka helaan ciyaartoydu. Qalabka casriga ah Waxay leeyihiin qaabeyn xoog leh, oo ay ku jiraan batari waara oo leh koronto degdeg ah iyo nidaamka qaboojinta hal-abuurka leh. Tani waxay hubineysaa in adeegsadayaashu ay helaan waqtiga ugu badan ee ciyaarta iyaga oo aan ku dhicin awoodda batteriga. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii ay jiraan xaaladaha batteriga ee ugufiican, mar marka qaarkood waan dhameysannaa. Hadda Black Shark wuxuu doonayaa inuu bixiyo hal caawinaad dheeri ah wuxuuna bilaabay daaqad cusub oo koronto oo leh awood batteri oo ah 10000mAh. Halkan waxaa ah Super Black Shark 10000mAh!
Black Shark 10000mAh: Xiaomi’s power power weyn ayaa timid!
Banka madow ee loo yaqaan ‘Black Shark 10000mAh powerbank’ wuxuu la imaadaa naqshad cajiib ah. Si kastaba ha noqotee naqshaddu waxay u egtahay mid xoogan oo umuuqata inay dhiiri gelisay taleefannada casriga ah ee loogu talo galay ciyaaraha Black Shark. Jirka wuxuu ka samaysan yahay caag iyo bir. Qeybta birta waxay leedahay xarig bir ah. Bangiga korantada wuxuu sidoo kale xarunta ku leeyahay xarig cagaaran (LED strip LED) cagaaran, oo muujinaya heerka baytariga. Dhanka kale halka hoose waa iftiin kale oo nal leh oo iftiimaya marka la xukumo.
Gudaha, kaydka korantadu wuxuu leeyahay muuqaalkiisa ugu weyn ee 18W lacagta degdegga ah ee lagu soo dallaco oo waa mid aan toos ahayn. Si kale haddii loo dhigo, waxay qaadataa 18W awoodda ugu badan ee lagu dallaco aaladda. Markay koronto ka baxdo si dhakhso ah ayaa loo dici karaa. Bangiga korantadu wuxuu leeyahay laba dekedood oo ah USB-A iyo hal USB-C oo loo adeegsaday in lagu dallaco batteriga. Dekada USB nooca-nooca “C” waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa inay ku dallacdo qalab kale adoo ku dallacaya. Shirkadda waxay sheeganeysaa inay ku dallaci karto taleefanka Black Shark 2 Pro illaa 47% 30 daqiiqo gudahood. Sidoo kale xusid mudan ayaa ah astaamaha amniga isku dhafan ee ka hortagga kuleylka, wareegga gaaban ama xad-dhaafka. Waxa kale oo jira batoon gaabinaaya rarida hadii loo isticmaalayo in lagu dallaco aaladda sida Black Shark Gamepad ama band smart.
Qiimo-jaban, Bangiga Shark 10000mAh powerbank wuxuu haatan ku socdaa ilaa 16 Euro oo loo maro websaydhka rasmiga ah ee Black Shark iyo Mi.com.